(AAPP) နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းမှ ဓါတ်ပုံပြခန်းဖွင့်ပွဲနှင့် (၁၈)နှစ်ပြည့်ပြုလုပ် ဟန်သစ်နိုင် (မိုးမခ) မတ် ၂၄၊ ၂၀၁၈ (AAPP) နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းမှ “MEMORY OF THE PAST” ဟုအမည်ပေးထားသည့် အကျဉ်းထောင်၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများနှင့် အကျဉ်းသားများ၏ဘဝကို ထင်ဟပ်စေသည့် ဓါတ်ပုံပြခန်းဖွင့်ပွဲနှင့် အေအေပီပီတည်ထောင်ခြင်း (၁၈)ပြည့်ပွဲကို မတ်လ၂၃ရက်၊ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် ၃၃ တိုးချဲ့ရပ်ကွက် ဥသဖုရားလမ်း အမှတ် (၇၅) တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ယခုပြသထားသည့်ဓါတ်ပုံများသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အတိတ်မှဆိုး ဝါးသည့် ဖြစ်ရပ်ဆိုးများနှင့် လက်ရှိ ဖြစ်နေဆဲ ပုံရိပ်များကို ပြည်သူ များနှင့် နိုင်ငံတကာမှသူတွေကို သိစေချင်ကြောင်း၊ ၄င်းဓါတ်ပုံများထဲတွင် ၁၉၆၂ ဆဲဗင်းဇူလှိုင်၊ ဦးသန့်အရေးအခင်း၊ ရှစ်လေးလုံးအရေးအခင်း၊ ၉၆-၉၇-၉၈ ကျောင်းသားလှုပ်ရှား မှု၊ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှု၊...
ကာတွန်း ဘီရုမာ – တောအကယ်ဒမီ (မိုးမခ) မတ် ၂၄၊ ၂၀၁၈ No tags for this post.
မောင်စိန်သော် ● တပ်တည်ဆောက်ရေးအတွေ့အကြုံ၊ ပြည်သူ့တပ်မတော် လက်တွေ့တပ်တွင်းလုပ်ငန်းတချို့ (မိုးမခ) မတ်လ ၂၄၊ ၂၀၁၈ အရှေ့မြောက် တရုတ်-ဗမာ နယ်စပ်အခြေခံစခန်းကာလ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ခေါင်းဆောင်တဲ့ ပြည်သူ့ဒီမို ကရေစီလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအတွင်း မိမိထက်အင်အားကြီးတဲ့ရန်သူကို ရင်ဆိုင်တိုက်နိုင်ဖို့ အဓိကတပ်၊ ဒေသတပ်နဲ့ ပြည်သူ့စစ် ဆိုပြီး တပ် ၃ တပ်စနစ်ကျင့်သုံးကာ အခြေခံဒေသတည်ဆောက်ထားတယ်။ ပါတီ ခေါင်းဆောင်တဲ့ ပြည်သူ့တပ်မတော်ဟာ စစ်ရေးတိုက်ပွဲတွေကို နည်းသဏ္ဌာန် ၃ မျိုးနဲ့ တိုက်ပွဲဝင်တယ်။ ပထမနည်း ပြောက်ကျားစစ်တိုက်နည်း၊ ဒုတိယ လှုပ်ရှားစစ်တိုက်နည်း၊ တတိယက နေရာယူစစ်တိုက်နည်းတို့ ဖြစ်တယ်။ အဖွဲ့ငယ်တွေ ဖြန့်ခွဲ လှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့...
မိုက်ခဲစိန် – အေးငြိမ်း၏ ‘စိတ်ပျက်စရာ မြန်မာစာရေးပုံ၊ ဘာသာပြန်ပုံနှင့် ကွန်ပြူတာ စာရိုက်ပုံများ’ ပို့စ် ပျောက်ဆုံးမှု ရှာပုံတော် (မိုးမခ) မတ်လ ၂၄၊ ၂၀၁၈ မိုက်ခဲစိန်လည်း စာရေးနေရင်းကနေ ရှာပုံတော်ဖွင့်ရပြန်ပါတယ်။ သာဂိက ဥာဏ်တိမ်လှတဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်လူပြိန်းပရိသတ်ကြီးကို အဆင့်မြှင့်တင်ရေး လုပ်ကြဖို့ စာရေးနေချိန်မှာ အေးငြိမ်း(လေးမျက်နှာ)ကလည်း ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်ကနေ ပို့စ်တခု တင်ပါတယ်။ မြန်မာစာရေးပုံ...
ဂျူနီယာဝင်းရဲ့ မြန်မာနေ့ရက်များနှင့် ပန်းများ စာအုပ် ထွက်ပြီ (မိုးမခ) မတ် ၂၄၊ ၂၀၁၈ ၂၀၁၃ တုန်းက မိုးမခ Kindle Version အဖြစ် Burmese Days & Flowers, ပါရမီစာပေတိုက်က Days & Flowers of Myanmar ပုံနှိပ်စာအုပ်အဖြစ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ယခု...
ညီလင်းနိုင် – “စိတ်ခတ်ကျောက် ၁၈” (မိုးမခ) မတ် ၂၄၊ ၂၀၁၈ တခြားတစ်ဘက်မှာ တပ်ခ်ျမဟာရှိနိုးနဲ့ နံရံကိုတဂျစ်ဂျစ်ကုတ်ခြစ်နေတဲ့အသံကို စိတ်မမှန်တော့တဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံသားအဖိုးကြီးဆီကကြားရတယ်။ အခုနေများ ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဦးသန့် သက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးရင် အနည်းဆုံးတော့ ကျွန်တော်တို့အဝတ်အစားတွေ အပိုယူခွင့်ရှိမှာ အခုတော့ ကိုယ်လုံးတီးရေချိုးပြီး ဒီအဝတ်ပဲပြန်ဝတ်နေရလို့ လူလည်းဝဲစွဲနေပြီဆိုတဲ့အသံကို ပဲခူးမြို့သားလေး သန့်ဇော်ဦးဆီကကြားရတယ်။ နောက်ဘဝရောက်ရင် ငုရင်ဗန်ထရွိင်းနဲ့ဆုံနိုင်မယ်ထင်လို့ ခေါင်မိုးပေါ်တက်ပြီးခုန်ချလိုက်တဲ့အသံကို ဗီယက်နမ်ကောင်လေးဆီကကြားရတယ်။...
မောင်မိုးသူ – မြန်မာ့အသံနှင့် ဘကြီးမိုး (ကုမုဒြာအွန်လိုင်း၊ ရန်ကုန်) မိုးမခ၊ မတ် ၂၄၊ ၂၀၁၈ ရန်ကုန်မြို့ ပြည်လမ်းရှိ မြန်မာ့အသံ အဆောက်အအုံသစ်ကြီး စတင်ွင့်လှစ်သည်မှစ၍ ဘကြီးမိုးနဲ့ မြန်မာ့အသံတို့ ပတ်သက်ခဲ့ကြပါတယ်။ စာရေးဆရာ ဘကြီးမိုးဟာ မြန်မာ့အ သံမှတစ်ဆင့် တာဝန်ခံထုတ်ဝေသော သောတရှင် မဂ္ဂဇင်းတွင် စာမူများရေးသားပေးပို့ရာ စာမူခကို ပြည်လမ်း မြန်မာ့အသံ...
မောင်အောင်မွန် ● ကျွန်တော်တွေးမိသလို ရေးပါမည် (၃၂၇) (မိုးမခ) မတ်လ ၂၃၊ ၂ဝ၁၈ နွေဦးနှင့် စာရေးဆရာ၏ အတွေးရူး (၁) ကျွန်တော် Radio Moscow တွင် အလုပ်လုပ်စဉ်က အပိုအလုပ်အဖြစ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ၏ နောက်ခံကို ဘာသာပြန် အသံသွင်းရာ၌ ပါဝင်ရသည်။ အပိုင်းတစ်ပိုင်းကို ဘာသာပြန်ခ (၁ဝ) ရူဘယ်လ်၊ မိတ္တူပေးခ...
ကာတွန်း Jison – သမ္မတကြီးကောက်ထားတဲ့ စာရင်း (မိုးမခ) မတ် ၂၃၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း - Ji Son
နေလွဏ်းအိမ် ● အဖိုးတန်​စက္ကူ (မိုးမခ) မတ်လ ၂၃၊ ၂၀၁၈ အချိန်​​တွေဘဝ​တွေကို အဲ့ဒီအတွက်​မြှုပ်​နှံခဲ့ကြ စီးရာမမှန်​တဲ့​ ရေလှိုင်း​တွေကြား ငါးဖြစ်​ရတဲ့ဘဝဟာ ငါးစာပဲဖြစ်​ခဲ့တယ်​ လမ်း​ဘေးက​လေးငယ်​​တွေကအစ ​တောင်းစား​နေသူ​တွေအဆုံး တစ်​ကိုယ်​​ရေစာ ဆာ​လောင်​မှုအတွက်​ သိက္ခာတရား​တွေကို ချ​ကျွေးခဲ့ကြ တစ်​​ထောင်​တန်​​တွေဟာ လူကုံထံ​တွေအတွက် အ​ပေါစားဆို​ပေမယ့်​ ဘဝတချို့အတွက်​ ဘုရားသခင်​ပဲ ကျကွဲသွားတဲ့မနက်​ဖြန်​​တွေထဲ ကြယ်​စင်​တစ်​လုံး အရည်​​ပျော်​သွားတယ်​ ညာဘက်​လက်​ကတက်​တူးပုံကို အသက်သွင်း​​ပြီး...
အမ္ဗနဒီကျော်စွာ ● ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်သော ပညာရေး (မိုးမခ) မတ်လ ၂၃၊ ၂၀၁၈ ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်သောပညာရေးဆိုသည်မှာ စာပေတစ်ခုတည်းကိုသာ အားပြုသင်ကြားပေးသော ပညာရေးမဟုတ်ပါ စာကိုအလွတ်ရအောင်ကျက်ပြီး အမှတ်ရအောင် ဖြေဆိုရသောပညာရေးမဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်သောပညာရေး သည်ကား စာဖတ်နည်း၊ စာရေးနည်း၊ တွေးခေါ်မျှော်မြင်နည်း၊ ကြံဆတီထွင်နည်း၊ မေးခွန်းထုတ်နည်း၊ ဖြန့်ကျက် ချိန်ဆနည်း၊ စုပေါင်းလုပ်ဆောင်နည်း၊ ခေါင်းဆောင်နည်းစသည်ဖြင့် ဆရာစားတစ်ကွက်မှမချန်ရဘဲ ဆရာထက် တပည့်...
လောကဓာတ်ခန်းသာဂိ – ဖေ့စ်ဘွတ်ပရိသတ်ကြီး အဆင့်မြင့်ကြဖို့အရေး (မိုးမခ) မတ် ၂၃၊ ၂၀၁၈ မတ် ၂၁ မှာ အင်တာနက်သတင်းတွေအရ Cambridge Analytica နည်းပညာဆက်ဆံရေးကုမ္မဏီဟာ ၂၀၁၆ ဇွန်လကတည်းက ဖေ့စ်ဘွတ် ပရိသတ်ရဲ့ သန်း ၅၀ရဲ့ ဒေတာတွေကို စုဆောင်းခဲ့တယ်၊ အဲသည်ဒေတာမိုဒယ်နဲ့ ထရန့်သမ္မတကင်ပိန်းအတွက် အသုံးချခဲ့တယ်လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။ အဲသည်အတွက် အမေရိကန်နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့...
ဦးဝင်းတင် (၁၉၃၀-၂၀၁၄) – ၂၀၁၂ က အပြောင်းအလဲ … ဘယ်သူ့အတွက်လဲ (မိုးမခအင်တာဗျူး ပြန်လည်တင်ဆက်ခြင်း) (မိုးမခ၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၂) ၂၀၁၂ ခုနှစ်ဟာ မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးရှုခင်းအတွက် အပြောင်းအလဲတွေနဲ့ နှစ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ အဲည်အပြောင်းအလဲတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆရာဦးဝင်းတင်နဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီး ဆရာ့သဘောထားကို မေးမြန်းခဲ့ရာကနေ အချက်အလက်အချို့ကို ကောက်နုတ်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ·...
ကာတွန်း မင်းထက်လူရဲ့လွတ်လပ်စွာဝေဖန်ကြပါ … (မိုးမခ) မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း မင်းထက်လူ
မောင်စွမ်းရည် ● ရွာလွမ်းချင်း (မိုးမခ) မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၁၈ ဘာပဲသောက်သောက် သောက်တတ်မှ ကောင်းတာကလား ထန်းရေသောက်တာတော့ ထန်းပင်အောက်မှာ အကောင်းဆုံးပဲ။ ထန်းပင်ရင်းက မြက်ခင်းပေါ်မှာ ပဲကြီးလှော်ကြဲ၊ ဆေးလိပ်ကြိုက်ရင် ဆေးလိပ်ခဲ ခြေဆင်းလဲလူ၊ အပူအပင်မရှိ။ ပဲစိကို တစိစီကောက် အလျားမှောက်ပြီး သောက်တာကို လက်ချော်ပြီး၊ ခွက်မကျော်ရင် ပျော်ရွှင်ဖွယ်အတိ အလွန်စည်းစိမ်ရှိတာကလား။ မိုးဦးကျစ...
ဇာဝါရီ ● လူငယ်များဖတ်ဖို့ (လုပ်နိုင်တာ စလုပ်) (မိုးမခ) မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၁၈ စာရေးသူ၏ တူ၊ တူမလေးတွေကို ပြောပြဖြစ်တဲ့ အသိပညာပေးပုံပြင်လေးတွေကို မိုးမခစာချစ်သူ လူငယ်၊ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားလေးတွေဖတ်ဖို့ မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ ချစ်တူ၊တူမလေးတွေရေ … ဒီတပတ် စပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းက … အေးမြမြ ဆောင်းရာသီမှာ ဘယ်သူမှ စောစောစီးစီး အိပ်ရာမှမထချင်ကြဘူး...
ကိုသန်းလွင် ● အိန္ဒိယမှ အက်ဒဟာစီမံကိန်း (မိုးမခ) မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၁၈ (၁) မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကနိုင်ငံတော်တွင် e-government စနစ်ကို လုပ်ကိုင်ရမည်ဟု မူဝါဒချကာဆောင်ရွက်နေသည်။ ကျွန် တော်တို့ များစွာကြိုဆိုပါသည်။ နိုင်ငံတော်ကြီး Smart Nation ဖြစ်ရေးအတွက် ဤခြေလှမ်းကိုလှမ်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်မည့်အရေးဖြစ်သဖြင့် ပိုမိုအားတက်ဘွယ် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ပါသော်လည်း အကောင်အထည်ဖေါ်ရာတွင်...
ဆောင်းယွန်းလ ● အသံထွက်များ (မိုးမခ) မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၁၈ နိုင်ငံအရေးကို စာလုံးပေါင်းဖတ်တော့ သူပုန်လို့ အသံထွက်ခဲ့တယ် သူပုန်အရေးကို စာလုံးပေါင်းဖတ်တော့ ဒုက္ခသည်ဆိုတဲ့ အသံထွက်ခဲ့တယ် ဒုက္ခသည်အရေးကို စာလုံးပေါင်းဖတ်တော့ ငွေဝယ်ကျွန်ဆိုပြီး အသံထွက်ခဲ့တယ် ငွေဝယ်ကျွန်ကို စာလုံးပေါင်းဖတ်ကြည့်တော့မှ စကားလုံးတွေ နေဝင်သွားမှန်းသိရတယ်။ ဆောင်းယွန်းလ No tags for this post.
လင်းငယ် ● နောက်ဆုံးနေ့ (မိုးမခ) မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၁၈ သေခြင်းတရားက ကိုယ့်အနီးက ရုတ်တရက် မပြောမဆို ဖြတ်သန်းသွားတော့ ကြောက်ရွံ့နေမိသည်။ သေခြင်းတရားက ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူကို ဆွဲခေါ်သွားတဲ့အခါ နာကျင်ကြေကွဲရသည်။ ဒီလိုနဲ့ အခုတလော သေခြင်းတရားအကြောင်းချည့် တွေးမိ နေဖြစ်သည်။ (၁) ကိုယ်က အင်္ဂလိပ်စာညံ့သည်။ ငယ်ငယ်က ရွာမှာနေခဲ့ရတာရယ် အားထုတ်မှု အားနည်းခဲ့တာရယ်ကြောင့်...
မောင်မောင်စိုး ● နှင်းဆီနီနီ အိပ်မက်များ (၁၉၇၅ – ၁၉၈ဝ) – အပိုင်း (၆၂) (မိုးမခ) မတ်လ ၂၁၊ ၂ဝ၁၈ ● ၂ဝ၂ စစ်ဒေသ ၂ဝ၂ စစ်ဒေသအား ၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သောစစ်ဒေသများထဲတွင် ပြသနာအများဆုံး အခက်အခဲဆုံးစစ်ဒေသလည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ စတင်ဖွင့်လှစ်ကထဲက လွတ်မြောက်သည့်...
ကျော်နိုင် ● မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီနှင့် ကောင်စီဥပဒေ ပုဒ်မ (၃၇)၊ ပုဒ်မ (၄၀)၊ နည်းဥပဒေပုဒ်မ (၁၀၂) (မိုးမခ) မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၁၈ မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီဥပဒေအရ အင်ဂျင်နီယာကောင်စီ စတင်ဖွဲ့စည်းသည့်အချိန်မှစ၍ ကောင်စီဥပဒေပုဒ်မ (၃၇) နှင့် ပုဒ်မ (၄၀) တို့ကို အင်ဂျင်နီယာအများက ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ကန့်ကွက်ခဲ့ကြသည်။ တဖန် နည်းဥပဒေထွက်လာ သော အခါ...
ကာတွန်း kzzh ရဲ့ လူကြိုက်နည်းလာသူတွေ (မိုးမခ) မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း - KZZH
မောင်အောင်မွန် ● ကျွန်တော်တွေးမိသလိုရေးပါမည် (၃၂၆) (မိုးမခ) မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၁၈ (မကြာမီထွက်လာမည့် ကြုံဖူး ဆုံဖူး ကြိက်ဖူးသူများ စာအုပ်ထဲကပါ) တင်တင်မူမသေ သေသော် တင်တင်မူပြန်ဖြစ်၏ (၁) ကျွန်တော်ရုပ်ရှင် စကြည့်စဉ်ကပင် မြန်မာမင်းသမီးများအနက် တင်တင်မူသည် အခြားမင်းသမီးများနှင့် မတူတမူခြားနေ ကြောင်း သတိထားမိ၏။ ဘယ်နေရာ ဘယ်ဟာရယ်လို့ အတိအကျမသိ။ ဗြိတိသျှဘားမားမှ...
ကမ္ဘာကြီးရေ ကဗျာနေ့မှာ ငါ ကဗျာမရေးတော့ဘူး ခင်လွန်း (မိုးမခ) မတ် ၂၁၊ ၂၀၁၈ ကဗျာတွေလဲ ဖတ်မနေတော့ပါဘူးကွာ တော်လှန်ရေးမှ မအောင်ဘဲ ကဗျာတွေလဲ စပ်မနေတော့ပါဘူးကွာ တော်လှန်ရေးလို့ပြောရင် ငပေါဖြစ်တာပဲ နိုင်ငံ့အရေးလို့ပြောရင် ငပေါဖြစ်တာပဲ ဒါပေမဲ့ ကွမ်းယာစားသလိုပေါ့ကွာ ပါးချောင်ထဲ ငုံထားလိုလဲ ငုံထား သွားနဲ့ ဖိဝါးချင်လဲ ဝါး သွားဖုံးကြားထဲညှပ်နေရင် လက်ညှိုးထိုးသွင်းပြီး...
ကာတွန်း ကိုခေတ်ရဲ့ အာစိတို့ကြိုက်တဲ့ကား (မိုးမခ) မတ်လ ၂၀၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ကိုခေတ်
မင်းကိုနိုင် ● ဖိနပ်အပေါင်းရဲ့ ဇာတ်ကြောင်းတွေ (မိုးမခ) မတ်လ ၂၀၊ ၂၀၁၈ ကိုမင်းကိုနိုင် လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှ ပြန်လည်ကူးယူပါသည်။ ဖိနပ်ဟောင်း မှန်သမျှဇာတ်ကြောင်းပြန်ပြစရာရှိတယ်ဟု ကျွန်တော်ကအဆိုတင်ချင်သည်။ ဖိနပ်နှင့်ပတ်သက်သည့် ဇာတ်လမ်း လူတိုင်းကိုယ်စီရှိသည်မဟုတ်ပါလား။ တစ်ယောက်က ပြောလိုက်သည်နှင့်ကိုယ့်မှာလည်းပြောစရာအသင့်ရှိပြီးသား။ အများစုမှာ လွမ်းစရာ၊ရယ်စရာ၊ ရှက်စရာ၊သံဝေဂရစရာအစုံပါပါလိမ့်မည်။ ဖိနပ်မှား၊ ဖိနပ်ပျောက်၊ ဖိနပ်ပြတ်ထိုမှစသည့်ဇာတ်လမ်းတွေများပါ သည်။ ဖိနပ်နှင့်ပတ်သက်၍ အစောဆုံးမှတ်မိကြတာချင်းလည်း တူ...
ဆလိုင်းဇုန် ● တောပန်းလေးရဲ့ မိုးကောင်းကင် (မိုးမခ) မတ်လ ၂၀၊ ၂၀၁၈ တောပန်းလေးအကြောင်းပြောတော့မယ်ဆိုရင် တောတောင်တွေနဲ့တောင်တန်းကြီးကို အရင်ပြောပြမှရမယ်။ တောင်တန်း ကြီးဆိုတာ တောင်ဆွယ် အသွယ်သွယ် တန်းနေတဲ့ မြေပြင် အနေအထားပါပဲ။ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အမြင့် တဖြည်းဖြည်း များလာလေလေ တောင်တန်းကြီးက ပိုမြင့်လေလေလို့ သတ်မှတ်တာပါပဲ။ တကယ်တော့ ဒီတောင်တန်းဟာ ပင်လယ်ရေ မျက်နှာပြင် ပေ...
ဇင်လင်း ● အဂတိတရားလေးပါးကို စောင့်ထိန်းကြမှသာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး တည်ဆောက်နိုင်မည် (မိုးမခ) မတ်လ ၂၀၊ ၂၀၁၈ နိုင်ငံတကာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအဖွဲ့ (Transparency International) က ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်အတွက် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုစာရင်း ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၁ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာ၌ မြန်မာနိုင်ငံက အမှတ် ၃ဝ သာ...
ကာတွန်း ATH ရဲ့ ရွာသားတွေ (မိုးမခ) မတ်လ ၂၀၊ ၂၀၁၈ No tags for this post.
မောင်စွမ်းရည် ● မန်းတက္ကသိုလ် ကလောင်ရှင်များအသင်း (မိုးမခ) မတ်လ ၂၀၊ ၂၀၁၈ မန်းတက္ကသိုလ်ကို ကျွန်တော် ၁၉၅၆ ခုနှစ်မှာရောက်တယ်။ ကျွန်တော်နဲ့အတူ တစ်နှစ်တည်း တက္ကသိုလ်ရောက်သူများက တော့ မောင်မိုးသူ (အမည်ရင်း စိန်မြင့်)၊ ကြည်အောင် (အမည်ရင်း ကြည်လင်း)၊ ကသာဝင်းကြွယ် (အမည်ရင်း ခင်မောင်ဝင်း)၊ ဘင်လူခင် (အမည်ရင်းကိုသိန်းဟန်း)၊ ညွန့်အေးခ...
Page 1 of 88412345...884»
နှစ်အလိုက် ပြန်ရှာရန် Select Month March 2018 (122) February 2018 (145) January 2018 (195) December 2017 (157) November 2017 (193) October 2017 (154) September 2017 (148) August 2017 (163) July 2017 (180) June 2017 (195) May 2017 (240) April 2017 (190) March 2017 (243) February 2017 (253) January 2017 (234) December 2016 (210) November 2016 (276) October 2016 (257) September 2016 (238) August 2016 (262) July 2016 (256) June 2016 (238) May 2016 (292) April 2016 (271) March 2016 (286) February 2016 (277) January 2016 (245) December 2015 (281) November 2015 (330) October 2015 (356) September 2015 (303) August 2015 (299) July 2015 (245) June 2015 (229) May 2015 (125) April 2015 (163) March 2015 (227) February 2015 (199) January 2015 (225) December 2014 (216) November 2014 (198) October 2014 (226) September 2014 (209) August 2014 (242) July 2014 (240) June 2014 (214) May 2014 (252) April 2014 (242) March 2014 (230) February 2014 (234) January 2014 (281) December 2013 (237) November 2013 (205) October 2013 (246) September 2013 (261) August 2013 (295) July 2013 (285) June 2013 (248) May 2013 (249) April 2013 (441) March 2013 (285) February 2013 (267) January 2013 (319) December 2012 (309) November 2012 (248) October 2012 (229) September 2012 (209) August 2012 (242) July 2012 (281) June 2012 (264) May 2012 (230) April 2012 (222) March 2012 (230) February 2012 (187) January 2012 (279) December 2011 (286) November 2011 (237) October 2011 (277) September 2011 (234) August 2011 (193) July 2011 (248) June 2011 (286) May 2011 (194) April 2011 (256) March 2011 (224) February 2011 (153) January 2011 (179) December 2010 (167) November 2010 (218) October 2010 (219) September 2010 (228) August 2010 (163) July 2010 (163) June 2010 (175) May 2010 (190) April 2010 (158) March 2010 (158) February 2010 (143) January 2010 (156) December 2009 (160) November 2009 (143) October 2009 (128) September 2009 (126) August 2009 (139) July 2009 (163) June 2009 (149) May 2009 (199) April 2009 (150) March 2009 (172) February 2009 (135) January 2009 (144) December 2008 (127) November 2008 (140) October 2008 (142) September 2008 (142) August 2008 (159) July 2008 (122) June 2008 (114) May 2008 (155) April 2008 (148) March 2008 (129) February 2008 (127) January 2008 (104) December 2007 (71) November 2007 (110) October 2007 (42)
(AAPP) နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းမှ ဓါတ်ပုံပြခန်းဖွင့်ပွဲနှင့် (၁၈)နှစ်ပြည့်ပြုလုပ်… https://t.co/g6Kf1PwCBh about 10 hours ago ReplyRetweetFavorite
ကာတွန်း ဘီရုမာ – တောအကယ်ဒမီ https://t.co/cBOlT4Gx7B https://t.co/noyyWIDswY about 11 hours ago ReplyRetweetFavorite
မောင်စိန်သော် ● တပ်တည်ဆောက်ရေးအတွေ့အကြုံ၊ ပြည်သူ့တပ်မတော် လက်တွေ့တပ်တွင်းလုပ်ငန်းတချို့ https://t.co/m1vxbYi9Y7 https://t.co/phPLQRyXV5 about 13 hours ago ReplyRetweetFavorite
မိုက်ခဲစိန် – အေးငြိမ်း၏ ‘စိတ်ပျက်စရာ မြန်မာစာရေးပုံ၊ ဘာသာပြန်ပုံနှင့် ကွန်ပြူတာ စာရိုက်ပုံများ’ ပို့စ် ပျောက်ဆုံးမ… https://t.co/zYRTZqvVwx about 15 hours ago ReplyRetweetFavorite
ဂျူနီယာဝင်းရဲ့ မြန်မာနေ့ရက်များနှင့် ပန်းများ စာအုပ် ထွက်ပြီ https://t.co/rLdxpJ0LYO https://t.co/V820hLKK8H about 17 hours ago ReplyRetweetFavorite
Cartoon Box (3,353)